Microsoft Teams Meeting ကို မှတ်တမ်းတင်ရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
Microsoft Teams အစည်းအဝေးကို မှတ်တမ်းတင်ရန် လွယ်ကူသောနည်းလမ်း
ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွင်လူတို့လိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမှာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်နောင်တွင်သိမ်းဆည်းရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်လည်ပတ်ရန်လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များကိုသင်ဆွေးနွေးနေပါက၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ကံကောင်းတာက၊ Microsoft Teams ကသင့်ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခွင့်ပေးတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြပေးလိမ့်မယ်။
အဆင့် 1. Desktop/Laptop ပေါ်တွင် Microsoft Teams အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် 2. လိုချင်သောလက်ခံသူများနှင့် အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ပါ သို့မဟုတ် စတင်ပါ။
အဆင့် 3. အစည်းအဝေးကို စတင်မှတ်တမ်းတင်ရန်၊ 'ကိုနှိပ်ပါ။ပိုများသော Options ကို'ခလုတ်ကို။
အဆင့် ၂။ 'ကိုနှိပ်ပါ။အသံသွင်းပါမီနူးမှ '' option ကို။
အဆင့် 5. မှတ်တမ်းတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အားလုံးကို ယခုအကြောင်းကြားပါမည်။
မှတ်တမ်းတင်ပြီးတာနဲ့နောက်ထပ် options ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး 'Stop Recording' option ကိုနှိပ်ပါ။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းရပ်တန့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊
ထို့နောက်အသံဖမ်းခြင်းကိုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်ရုပ်သံလိုင်းအစည်းအဝေးဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်အခြားအစည်းအဝေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်လျှင် OneDrive ဖြစ်လျှင် SharePoint သို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ရုပ်မြင်သံကြား၌တွေ့ဆုံနေပါကအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်အစည်းအဝေးစကားပြောတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ်ရုပ်သံလိုင်းဆက်သွယ်မှုတွင်ဖြစ်စေပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒီလင့်ခ်တွေဟာခုနစ်ရက်ပတ်လုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော Microsoft Edge တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
နောက်တစ်ခု TikTok ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်သူက စတင်တာလဲ။